Eco-inoshamwaridzika White Kraft Pepa Chinyorwa Chikafu Midziyo
Nyika zhinji dzakapa kurambidzwa kwepurasitiki. Pasi peichi chiitiko, isu takakurudzira edu echikafu-giredhi chena kraft mapepa akateedzana makomputa akavezwa neakajeka yakajeka muvharo kune vakawanda vatengi, ayo anogona zvirinani kuratidza chikafu mubhokisi.
Humba yedu yekuumba yezvigadzirwa zvekudya inoenderana nekuiswa kwezvikafu zvakasiyana, senge sushi, bento, saladi, chingwa, nezvimwe.
Ichi chigadzirwa chinogamuchira mutengi akasarudzika saizi, chimiro, kudhinda uye kuputira zvinodiwa.
Isu tatengesa midziyo iyi kuItari, Spain, Canada, Australia nedzimwe nyika. Isu tine hanya nemutengo wakanakisa newakagadzirwa dhizaini kubatsira mutengi kuchengetedza mutengo uye kuwana yakanaka margin.
Brown Kraft Pepa Bhokisi
Iyi Brown Kraft Pepa Bhokisi Fekitori ine Yakasarudza yemhando yepamusoro zvigadzirwa, magadzirirwo akaomeswa uye akapfava, akatsetseka uye akatsetseka, anoshanda mushe, mamwe mamaki. Hwemhizha hunyanzvi, yakakwana kona kurapwa, yakanaka uye yakasimba. Kugadzirwa kwakasarudzika kunoita kuti bhokisi rezvipo riwedzere kuvezwa.
CHUNKAI'S Sushi bhokisi rine mukana mukuru senge pazasi:
1.Good Sealling yekuchengetedza yakachengeteka
Kukura Kwekusiyana kwesarudzo yako
3.Thicker uye Yakaomarara Material
4.Exquisite Dhizaini ine yakanaka patani
5.Antifogging, zvirinani pakuratidzira
Corrugated Pepa Zvibereko Bhokisi
Iri Corrugated Pepa Rezvibereko Bhokisi rine matatu matete epepa rakakora mapepa, akasimba uye anogara. Mavhavha akagadzirirwa kuita kuti chigadzirwa chisanyanya kuora. Yakasarudzika pateni kudhinda, zvinoenderana nemufananidzo wemango, wakanaka uye nerupo, wedzera chigadzirwa kukosha. Iyo mubato unonzwisisika mukugadzirwa, hazvisi nyore kutyora, uye haukuvadze ruoko. Bhokisi iri rakakora uye rakasimba, chikafu-giredhi mbishi zvinhu zvine FSC chitupa, zvine hutano uye zvakatipoteredza zvine hushamwari, izvo zvinogona kusangana neFDA standard, yakachengeteka uye kusvibiswa. -mahara. Iyo crease dhizaini inoita kuti zvive nyore kuvhura uye kuvhara panguva yekuishandisa.
Brown 3 rukoko chemabhokisi ePizza Bhokisi
Yakadhindwa Pizza Bhokisi yakanaka, iyo pateni inokwezva, uye hazvisi nyore kudzima. Inonyaradza uye inotsvedzerera pamusoro, anodhinda anogona kuve akagadziriswa, uye iyo yekuvhiya gomba dhizaini inovimbisa kuti iyo pizza haina kudzikira. Bhokisi iri rakasimba kwazvo, chikafu-giredhi mbishi zvinhu, zvine hutano uye zvakatipoteredza zvine hushamwari, izvo zvinogona kusangana neiyo FDA standard, yakachengeteka uye yakasviba-isina. Iyo crease dhizaini inoita kuti zvive nyore kuvhura uye kuvhara panguva yekuishandisa.
Biodegradable Chikafu Mudziyo
Plastiki Bvudzi Kuvaka Fiber Powder Bhodhoro
Iyi yePurasitiki Bvudzi Kuvaka Fiber Powder Bhodhoro ikozvino iri kuhotera muAsia. Tinogona kupa mutengo unokwikwidza webhodhoro iri, nekuti isu takazvidemba uye tikasimudzira isu pachedu. Saka, kana iwe uchida kutenga yakachipa yePurasitiki Bvudzi Kuvaka Fiber Powder Bhodhoro, ino ichave sarudzo yako yepamusoro.Takatengesa bhodhoro iri kuUSA, Russian, EU nedzimwe nyika.Tine hanya nemutengo wakanakisa neyakagadzirwa dhizaini mutengi chengetedza mutengo uye uwane yakanaka margin.
500ml Matte Nhema girazi mwaya Bhodhoro
Iyi 500ml Matte Dema Girazi Rekuputira Bhodhoro rakanaka kwazvo, rinokodzera mhando dzese dzemvura.Iyi Isina Refa Refillable Yakajeka Girazi Spray Mabhodhoro e4 Pack 16 oz yeAkakosha Oiri, Aromatherapy, Kuchenesa Zvigadzirwa, Perfume, Doro Sterilizer, ine 4 Mahara Sprayers, 4 Caps .Package Sanganisira --- 4 Rongedza 16 oz Girazi Spray Mabhodhoro ane Mahara akakosha Oiri epurasitiki Felimu, 4 Bhodhoro Caps uye 8 Pcs nhema chaki zvinyorwa zvekusanganisa, Homemade Kuchenesa Zvigadzirwa. Yakakura 16 ounce Girazi Spray Bhodhoro ine nyore kudhonza kamwene iyo inogona kuiswa kune yakanaka mhute kana rwizi rwakasimba.Tinogona kugadzirisa ruvara rwebhodhoro, zvakare kunyora kana kudhinda logo pabhodhoro kana kapu.